कांग्रेस बैठकमा आज ८ जना केन्द्रिय सदस्यले धारणा राखे, भोली बिहान ११ बजे पुन: बैठक हुने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कांग्रेस बैठकमा आज ८ जना केन्द्रिय सदस्यले धारणा राखे, भोली बिहान ११ बजे पुन: बैठक हुने
काठमाडौँ । प्रस्तावित विधान संशोधनका विषयमा केन्द्रित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आठ जना केन्द्रीय सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेका छन्।
पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, दिलबहादुर घर्ती, डा. मीनेन्द्र रिजाल, शङ्कर भण्डारी, जीवन परियार, वीरबहादुर बलायर, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा तथा केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य हसन अन्सारीले आआफ्नो धारणा राखे।
मङ्सिर १३ गतेदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त मस्यौदामाथि छलफल जारी छ। अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।